Abantwana bayamangalisa. Kodwa ngamanye amaxesha bafuna ukubalekela ekupheleni kwehlabathi. Ngamanye amaxesha kubonakala ngathi bayakuqhubela ngamabomu. Kwaye amazwi phambi kwabo akwazi ukufikelela. Emva koko uthabathela kwindawo echanekileyo, kwimbono yakho, indlela yokuthonya-ukukhala. Akunjalo? Kodwa oku akusebenzi. Ukongezelela, kubangela ubugwenxa, ukwesaba, kuncedisa ekuphuhliseni ukwesaba kwabantwana kunye neengxaki. Ewe, kunye neentsholongwane zakho zonakalisa ukugqibela. Ngoko ke ungafunda njani ukuba ungakhangeli ukukrazula kubantwana? Awuyi kukholwa, kodwa kukho ezinye iindlela ezilula kakhulu ezikhoyo kumzali ngamnye. Oku kuya kunceda kakhulu ubomi bakho.
Uya kumangaliswa, kodwa isebenza ngokungazelelwe! Ukuba uthengisa into, ngoko abantwana kufuneka bathule beve. Xa babuza kwakhona into oyithethayo, phinda ngokumemeza okukhulu, kodwa akukho nto enye. Kancinci, oku kuya kubangela ukuhla kwezwi labo. Indlu iya kuba nzima kakhulu.
2. Thatha ixesha lokuhamba.
Ukuba abantwana bakho baqala ukumemeza nokuphikisana, baxwayise ukuba awuyi kuphakamisa ilizwi lakho. Batshele ukuba uhamba, umzekelo, ukuya ekhitshini, kwaye banokuza bakufumene apho bekulungele ukuthetha bathule kwaye bathule.
3. Thetha kwizwi "elungileyo".
Iingcali kwiinkalo zonxibelelwano kunye nolwimi olucebisa: "Ungalibali ukuhlawula ithoni yakho ekupheleni kwesigwebo, kungenjalo kuya kuvela njengombuzo, kungekhona isicelo, kwaye abantwana abayi kuthobela." Kule meko, kuthetha ukuba abantwana, Baya kuthatha ngokuzenzekelayo ibinzana lathi "kwi-right" ithinative tone njengomyalelo, baya kukuphulaphula kungekudala kunokuba "uvale" okanye ukhawuleze.
4. Khetha amagama.
Batsho ngokucacileyo oko ufunayo kubo, kungekhona oko ungafuni ukuba benze. Oku kubaluleke kakhulu. Thetha ukuze abantwana baqonde oko bafuna kubo. Musa ukukhawuleza ngamazwi, ngokucacileyo kwaye ngokucacileyo uthethe oko ufuna. Ukuba bayakukhathalela, baxelele ngokuphindwe kathathu. Uphando lubonisa ukuba i-40 pesenti yabemi kufuneka ive izinto ezintweni ezintathu ngaphambi kokuba zizithathe ngokungqongqo!
Kukho inkqubo ye "ezintathu zepansi", enceda kwiimeko ezinjalo:
1. Ukuqonda oko abantwana bakho bafuna.
2. Chaza oko ufuna.
3. Chaza ukuba kutheni.
Ukuba, umzekelo, baxhuma eludongeni lwaseSweden, bathi uyazi, kubonakala kukuhle, kodwa banokuzilimaza kwaye ufuna ukuba bayeke.
5. Yenza ukukhala ngokucula kunye nomdaniso.
Ingazwakala iphosa, kodwa isebenza! Ukuba ufuna ukukhwaza - bula! Iyakunciphisa ubomi bakho ngaphakathi, kwaye ubenze abantwana bahlekise. Ingxabano iya kulahleka ngokwayo. Okanye ubalekele ku-10 kuphela ukucima umoya wakho.
6. Khangela kwisibuko.
Enye yeendlela ezingavumelekanga, kodwa ezisebenzayo. Xa uqala ukumemeza, jonga ubuso bakho. Akukho mnandi, ngaba kunjalo? Ubuso bakho kwimeko yesimo sendalo bumnandi kwaye bububele. Ngaba kuyafaneleka ukwenza i-monster ngaphandle kwakho?
7. Musa ukumemeza - bhala.
Ukuba ufuna ukuthetha into ebalulekileyo, kodwa awukwazi ukuthetha ngokuzamile, zama ukubhala phantsi kwinqanaba elifutshane kwaye uyinike lona. Ukongeza, ungathumela i-SMS okanye i-imeyile. Baza kufumana ulwazi ngaphandle kwetoni yakho. Baya kuyithatha, ngaphandle kokuba baya kumangaliswa. Enyanisweni, le ndlela isebenza kuphela kubantwana abadala.
8. Vala amehlo akho.
Yenza nje xa uthetha nabantwana. Akukwazi kakuhle ukuba kutheni le nto isebenza, kodwa iyancipha kwaye ivelise ingcamango. Awufuni ukumemeza konke.
Le yimiqathango eyisiseko apho uza kuzigcina ekuhluphekeni. Kwaye nabantwana bakho nabo. Ngoku wonke umzali uya kuba nolonwabo ngakumbi, njengoko uya kufunda ukuba angakhange abize abantwana. Ekugqibeleni, unokonwabela ubomi ngokubantwana bakho, kwaye ungawuguquli ube yinqaba. Ulonwabo noxolo!
Umdlalo omtsha wokuNyaka omncintiswano kunye nemidlalo yabaselula esikolweni
Iimfestile zefestile eziphathekayo
Ukukhulisa umntwana kwintsapho epheleleyo
Umsebenzi wowesifazane onesizungu
Yintoni enokuyenza xa umntwana egawula umzimba wangaphandle
I-Easy Bunny Cake
Ukukhawuleza kunye nokuhlwaya: amaqebelengwane okuzenzela
Uhlobo oluNcinci uLiasan Utiasheva 2016-2017
Musa ukuthenga into engeyomfuneko
U-Andrei Arshavin unomtshato kunye no-Alisa Kazmina, ifoto